ကျွန်တော်နှင့် အိမ်ထောင်ရေး – Giant's Web
© 2016. Powered by WordPress. Created by Zox Zin Min	ကျွန်တော်နှင့် အိမ်ထောင်ရေး
← ၁ နဲ့ င၊ ပ နဲ့ ဂအိမ်လွမ်းသူ →
13 comments on “ကျွန်တော်နှင့် အိမ်ထောင်ရေး”	မိုးထက်အိမ် says:	November 8, 2009 at 1:21 pm	:)…. မိန်းမကို တော်တော်ချစ်ပုံပေါ်တယ်ဗျနော်…. 🙂
chit loon thu says:	November 8, 2009 at 4:38 pm	ဖတ်ရတာ ကောင်းတယ် ဗျာ .. ကဗျာလေးကလည်းကောင်းသလို.. ဖတ်ရတာလည်းကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်
သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေးရတာဟာ.. တစ်ကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ် .. ပျော်ရွင်ပါစေခင်ဗျာ
ဖိုးဂျယ် says:	November 10, 2009 at 8:13 pm	ကောင်းတယ်ဗျာ စိတ်ကြည်နူးစရာ ကဗျာလေးပေါ့
ရှမ်းလေးသွေး says:	November 21, 2009 at 11:11 pm	ကဗျာလေးက မိုက်တယ်ဗျာ….အစ်ကိုတို့ အိမ်ထောင်ရေး သာယာပါစေဗျာ….
ခွန်ကြီး says:	November 22, 2009 at 12:04 am	အရမ်းကောင်းတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ . . ခံစားသွားပါတယ် ။
ကျွန်တော် says:	December 13, 2009 at 7:37 am	ထာဝရသာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ..
မောင်ဘကြိုင် says:	December 14, 2009 at 6:27 am	အဲလောက်ခံစားချက်ပြည့်စုံနေရင် အစ်ကိုတို့အိမ်ထောင်ရေးသေခါပေါက်သာယာမှာပဲ
ကျွန်တော်ထပ်ဆုတောင်းပေးသွားတယ်အစ်ကို သာယာငြိမ်းချမ်းမှုများစွာပိုင်ဆိုင်ပါစေး)
ခိုင်လေး says:	December 15, 2009 at 2:27 pm	ကဗျာလေးကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ခံစားချက်နှစ်မျိုးဖြစ်မိပါတယ် အစ်ကို။တစ်ခုက ၀မ်းသာမိတယ်။
တစ်ခုက၀မ်းနည်းမိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ ၀မ်းသာရတာလဲဆိုတော့ သိပ်သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုကိုတွေ့
လိုက်ရသလိုခံစားမိလို့ပါ။ခုလိုမိန်းမအပေါ် နေရာပေး ဂရုတစိုက်ကြင်နာတတ်တဲ့အစ်ကို ကိုလဲလေးစားချီးကျူးပါတယ်။၀မ်းနည်းတာကတော့ အိမ်ထောင်ရေးကံဆိုးလွန်းပြီး သိပ်တကိုယ်ဆန်တဲ့
ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ကုပိုင်ဆိုင်ထားရလို့ပါ။ဒီကဗျာလေးဖတ်ရတော့ ခိုင်လေးဝမ်းနည်းမိတယ်။ဒါပင်မဲ့ သူကို ခိုင်လေး အရမ်းချစ်တယ်။သူဥပက်ခါတွေကိုတော့ ခံနိုင်ရေမရှိဘူး။
သားဖြိုး says:	December 20, 2009 at 3:15 pm	မိုက်လှချည်လား… ဝေးမှ ပိုလွမ်းတတ်လာတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့… ခင်ဗျား အမျိုးသမီးလည်း ခင်ဗျားကို အသည်းစွဲ အရိုးကွဲအောင် ချစ်မှာ သေချာပါတယ်…
အိမ် says:	December 20, 2009 at 4:06 pm	အယ်… လန်းတယ်ဗျာ.. ကဗျာက စာကြောင်းတွေ ထောက်တောက်တောက် ဖြစ်နေပေမဲ့ စာရေးသူ ဆိုလိုရင်းလေးက အတော့်ကို သဘောကျစရာပါပဲဗျာ..။ ဟုတ်တယ်နော်.. ကွဲသွားတဲ့ မှန်စတိုင်းမှာ မင်းပုံရိပ်တွေ ပိုထင်နေတယ် ဆိုတာ….။ ခိုက်သွားပြီ။
ဒါပေမဲ့ ကောင်မလေးတွေ တမျိုးတညမည်ထင်အောင်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာရယ်၊ ဟုတ်တယ်လေ တော်ကြာ ..သူတို့ စိတ်ထဲမှာ.. ဒင်းတို့တွေကို ဒီလိုလုပ်မှ ပိုသတိရ၊ လွမ်းနေမှာလို့ ထင်ပြီး.. လျှောက်လုပ်ကုန်ပါ့မယ်ဗျာ.. .။ သူခိုးဓါးရိုးတော့ မကမ်းပါနဲ့ ဆရာရယ်။
အချစ်မဲ့ဂစ်တာ says:	December 23, 2009 at 1:08 pm	အဲဒီမှန်လေးကို မကွဲအောင် ကြိုးစားထားကွ… အဲဒီမှန်လေးဟာ ဒီအတိုင်းလေးပဲ တစ်သက်လုံး ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ထင်ဟပ်နေပါစေဗျာ…
အကီနို says:	December 23, 2009 at 1:34 pm	အခုမှ ဒီအိမ်ကလေးကို လာလည်ဖူးပေမဲ့ အကိုရဲ့ ကောင်မလေး အတွက် ချစ်ခြင်းကို တန်ဖိုးထားလေးစားမိပါတယ်..သာယာခိုင်မြဲတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးတခုဖြစ်မယ်ဆိုတာ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။
ဇာဏီ says:	February 15, 2010 at 7:31 pm	အစ်ကိုရေ…အဲလောက်ထိ ချစ်နေမှတော့..ဗျာ..
ဒီကမ္ဘာမှာ.. အပျော်ဆုံးသူ ဘယ်သူဖြစ်နေမလဲ..တွေးကြည့်စရာလိုသေးလားဗျာ